Ọnụ ala Vertical Fatịlaịza igwekota igwe na ndị na - eweta igwe na YiZheng
Gịnị bụ Vetikal Fatịlaịza igwekota igwe?
Vetikal Fatịlaịza igwekota igwe bụ ihe dị mkpa maka ịgwakọta ngwa ngwa na ntinye nke fatịlaịza. Ọ mejupụtara agwakọta cylinder, etiti, moto, reducer, rotary ogwe aka, edemede spade, ihicha scraper, wdg, na moto na nnyefe usoro na-setịpụrụ n'okpuru mixgwakọta cylinder. Igwe a na - ewelata ihe eji agho cycloid iji kpoo ya ozugbo, nke na - eme ka mmeputa nchebe.
Kedu ihe eji eji igwe igwe ihe eji eme ihe?
Nke anyi Vetikal Fatịlaịza igwekota igwe dị ka akụrụngwa agwakọta dị oke mkpa na ahịrị mmepụta fatịlaịza. Ọ na-edozi nsogbu ahụ na oke mmiri agbakwunyere na usoro agwakọta siri ike ịchịkwa, yana dozie nsogbu ahụ na ihe dị mfe ịgbaso na agglomerate n'ihi obere ike na-akpali akpali nke igwekota fatịlaịza izugbe.
Iji igwe igwe nri fatịlaịza igwe
Vetikal Fatịlaịza igwekota igwe ga - agwakọta ihe dị iche iche iji mezuo ebumnuche nke ngwakọta edo.
Uru nke Igwe Vertical Fatịlaịza igwekota
(1) N'ihi na cross-axis nzukọ jikọọ n'etiti akpali shọvelụ na n'usoro ogwe aka, na a sere mkpanaka ma ọ bụ ịghasa na ndokwa iji mezie na-arụ ọrụ ọdịiche nke akpali akpali shọvel, na onu nke ike ihe jamming nwere ike ihu ọma tutu amama belata arụ ọrụ na-eguzogide na-eyi.
(2) Akuku dị n'etiti arụ ọrụ nke shọvelụ na-akpali akpali na ntụgharị ihu na ihu ihu na ihu na-enweghị ntụpọ, nke nwere ike ịkwalite mmetụta na-akpali akpali ma melite ogo agwakọta.
(3) Ọdụ ụgbọ mmiri dị n'akụkụ mgbidi nke gbọmgbọm ahụ. Gbọmgbọm nwere ike ịgbanye transversely na rack, yana enwere ike ịtọlite ​​scraper iji mee ka ngwa ngwa na ngwa ngwa karịa.
(4) Ọ dị mfe ma dịkwa mma ilekọta.
Vetikal Fatịlaịza igwekota igwe Video Display
Vetikal Fatịlaịza igwekota igwe ihe eji ahọta
25-30 m3 / awa
≥35 m3 / awa
≥40 m3 / awa
35r / nkeji
27 r / nkeji
Welite ọsọ nke hopper
18m / nkeji
Ike nke akpali akpali moto
kpoo ikike nke moto ahụ
Oke urughuru nke nchịkọta
Dum unit ibu
Nke gara aga: Ngwakọta fatịlaịza BB
Osote: Rotary Single Cylinder Ihicha igwe na Nhazi Fatịlaịza
Okwu Mmalite Gịnị bụ Fatịlaịza Pellets Jụrụ Igwe? Emere Fatịlaịza Pellets Cooling Machine iji belata mmetọ nke ikuku oyi ma melite ebe ọrụ. Iji igwe eji eji eji igwe eme ihe bụ ka usoro fatịlaịza fatịlaịza bekee dị mkpụmkpụ. Abịa na igwe ihicha nwere ike ime ka co ...